Ọdụ ụgbọ elu Budapest na-agbakwụnye LOT ọzọ na map eserese
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọdụ ụgbọ elu Budapest na-agbakwụnye LOT ọzọ na map eserese
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Hungary na -agbasa akụkọ • News • Akụkọ na -agbasa ozi Poland • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọdụ ụgbọ elu BudapestMwepụta nke ọrụ afọ niile na Seoul Incheon na LOT Polish Airlines na mbido afọ a nyere aka n'ụzọ dị ukwuu na mmepe Hungary n'ọnụ ụzọ Asia. Taa, nanị ọnwa abụọ ka usoro a, ọdụ ụgbọ elu na-eme ike karịa ike siri ike karịa na Seoul chọrọ ka ụgbọelu na-ekwupụta mmụba ugboro, na-arụ ọrụ ugboro anọ kwa izu site na May na-esote.
Ebe ha gbara akaebe dị nso na 40% na ahịa Incheon-Budapest kemgbe 2016, ụfọdụ ndị njem 67,000 si na isi obodo Korea pụọ ​​n'afọ gara aga n'isi obodo Hungary. Site na mkpa doro anya maka njikọ na-enweghị nkwụsị, mmụba ngwa ngwa na-abawanye karịa na-egosi nnweta dị elu na ahịa na-eto eto.
N'ikwu okwu banyere mmụba ugboro ole na ogbako a na-eme taa, Kam Jandu, CCO, Ọdụ ụgbọ elu Budapest kwuru, sị: “Ọganiihu na mmụba na-aga n'ihu nke netwọkụ Asia anyị na-enye anyị ohere karịa imeghe Budapest nye ụwa. Ike ndị ọzọ a na-arụ na ọrụ Seoul na-egosi n'ụzọ doro anya ọganihu na uto nke netwọkụ anyị. ” Ọ gbakwụnyere, sị: “Ka anyị na-ezikwa njikọ ọhụrụ abụọ ọzọ maka S20, ntụkwasị obi LOT na-aga n’ihu n’ahịa anyị na-enyere anyị aka ịgba akaebe afọ ọzọ ọzọ maka Budapest.”
N'akụkụ ọkwa mmụba ugboro ole a, Budapest gosipụtara nkwupụta nke LOT si ụzọ iri na abụọ na nke iri abụọ na atọ, n'ihi mmalite S12. N’ịbawanye ebe njedebe na ọdụ ụgbọelu nke aka ya, ụgbọ elu Polish ga-ebido ọrụ kwa izu na Dubrovnik na Varna site na 13 June 20. N’agaghị asọmpi na nke ọ bụla n’ime ọrụ ndị a, mmekọrịta LOT na Budapest Airport na-aga n’ihu.
ọdụ ụgbọ elu Budapest Lọt Polish Airlines